Kutyisa - Nhau Dzemabhuku | Zvinyorwa Nhau (Peji 2)
Ann Radcliffe anoonekwa semupiyona weiyo gothic rinotyisa bhuku. Akafa pazuva rakadai nhasi muna 1823 muLondon. Aya ndiwo mamwe emabasa ake.
Joe Hill izita rekunyepedzera raJoseph Hillstrom King, uye ndiye mwanakomana waStephen King. Saka imba yemadzimambo ekutyisa inosimbiswa.
Asingafi Dracula. 7 zviso zvevampire naBram Stoker
Dracula, Bram Stoker asingafi vampire, anga aine akawanda mavhezheni uye zviso mumabhaisikopo, ichangoburwa mune ichangopfuura BBC nhepfenyuro. Ini ndinoongorora idzi 7.
Chakavanzika chevechidiki uye yekufungidzira riano zano rehungwaru rakabata vadiki nevakuru kubva parakabudiswa. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Stephen King Mhuka Yemakuva
Animal Cemetery ibhuku rinotyisa rakanyorwa naStephen King iro rinotaurira nyaya yenyika yakatukwa. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Iyo Vampire Diaries
Vampire Makronike inozivikanwa saga saga inoratidza imwe yechokwadi panowanikwa mavampire. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Iyo Tales yeJungle naHoracio Quiroga chibereko cheimwe yematambudziko mazhinji akasangana nemunyori. Huya uzive zvishoma nezve iri basa.
Carrie inyaya umo Stephen King anoratidza chokwadi chekushungurudzwa kunoitwa nevechidiki vazhinji muzvikoro. Huya uverenge zvishoma nezvazvo.
Kutaura nezvaStephen King arikutaura nezve mumwe wevanonyanya kutyisa vanyori munyika, mabasa ake zvikamu zvechitendero. Uyai muverenge zvishoma nezvazvo.
Iyo Shining, inotungamirwa naStanley Kubrick, inoonekwa seyekunamata firimu. Asi munyori wefirimu haana kuzvifarira. Verenga pano nei King asina kuzvifarira.
Mabhuku mashanu evorcist evateveri vaDhiabhori nekudzungaira kwake
Ivo vachiri mufashoni. Dhiabhorosi nevaya vanorwa naye: vane mukurumbira wekudzinga mweya. Ini ndinoongorora mashanu mazita pamusoro pavo, pakati pevamwe, zvekare zveBlatty naLevin.
Mary Shelley. Makore zana nemakumi masere nesere pasina musiki weFrankenstein. Mitsara uye nhetembo.
Mary Shelley aingova namakore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa paakafa musi waFebruary 53, 1. Iwo makore gumi nematanhatu asina mugadziri waFrankenstein. Ndinorangarira naye nhatu nhetembo dzake.
Rufu. 6 kuverenga uye nzira nhanhatu dzekuzviudza nekuzvinzwisisa
Ini ndinosarudza aya matanhatu ekuverenga andinomira nemabatiro avakandibatsira kuti ndinzwisise kukosha kana zviratidzo zvekufa mune mamwe mafomu.
5 zvinyorwa zvitsva zvaNovember kubva kuGómez-Jurado, Jacobs, Stoker, Safier naCoben
Mbudzi inotanga nezvinyorwa zvekunyora zvakasainwa nemazita saGómez-Jurado, Jacobs, Coben, Safier naStoker. Mhando dzakasiyana uye tarisiro yakanaka.
Dracula, mutambi anotyisa kwazvo mumabhuku, akafuridzirwa nemabhuku makumi maviri nematanhatu.
ILondon Library svondo rino yakaratidza mabhuku makumi maviri nematanhatu akabatsira Bram Stoker kugadzira Dracula, mutambi anotyisa kwazvo mumabhuku.
Biography uye akanakisa mabhuku aStephen King
Stephen King's biography uye akanakisa mabhuku anotinyudza munzvimbo yakasarudzika yakarukwa naMambo wekutyisa mumakore makumi mashanu apfuura.
Kurira muzhizha ne7 yakasarudzika uye mashoma echinyakare anotyisa mabhuku
Kugamuchira zhizha, mazita anotyisa naStoker, Poe kana Stevenson, zvimwe zvinotyisa muRoman Hispania uye musanganiswa wesainzi yekunyepedzera nekutya kwekutya.
Makore 159 aArthur Conan Doyle. 6 zvidimbu zvemabasa ake.
Nhasi izuva regumi nemashanu rekuzvarwa kwaArthur Conan Doyle, munyori wekugadzira weSherlock Holmes. Ini ndinopemberera kupemberera kwake nezvimwe zvidimbu zvebasa rake.
Symbology uye psychoanalysis muPoe Kupunzika kweImba yaUsher
Kuwa kweImba yeUsher ndeimwe yemabasa anozivikanwa aEdgar Allan Poe. Ichi chinyorwa chikamu chetsananguro yekoreji.
"Mumakomo eMadness" inyaya inotyisa yepasi rose inotsanangudza kusakosha kwedu isu tiri pakati pezvakakura zvakasikwa. Chii chinotyisa pamusoro penyaya iyi chitarisiko chayo seyakaitika mushumo wesainzi.
Zvinotyisa. Iyo terevhizheni inoenderana neDan Simmons 'inoverengeka inosvika
Zvichava muna Kubvumbi. Iyo AMC network yakachinjisa Dan Simmons 'inozivikanwa nhoroondo uye yekufungidzira inova mune terevhizheni nhepfenyuro yakaburitswa naRidley Scott. Isu tinotarisa.
Zuva reKatsi rePasi. Mabhuku manomwe pamusoro peti kitties.
PaZuva reKatsi rePasi rose, iro rinopembererwa nhasi, ini ndinoongorora mazita aya apo kittens emarudzi ese ndiwo protagonists. Inoyevedza, inoyevedza, inotyisa uye sosi yekufemerwa kunyora.
Frankenstein. Chikoro chaMary Shelley chinotendeuka mazana maviri
Paive muna Ndira 1, 1818 pakaburitswa _Frankenstein kana iyezvino Prometheus_, iro basa rakasimudzira munyori waro, weBritish Mary Shelley. Isu tinoshanyirazve yakasarudzika par kugona mune zvinyorwa.
"Mhosva dzegungwa", kutya uye kufungidzira kubva paruoko rwaGemma Herrero.
Isu tinokupa iwe "Mhosva dzegungwa", naGemma Herrero. Finalist yeiyo Amazon Literary Award 2017. Kutyisa mune kwayo yakachena fomu.
Muchinyorwa chanhasi ndinokuudza kuti ndeapi matatu mabasa andaifarira zvakanyanya neumwe wevatenzi vemhando inotyisa: Stephen King. Unobvumirana neni here?
Vanyori venguva ino veGalician izvo zvinofanirwa kuzivikanwa
Kudzokorora mazita evanyori vana vechiGalician vemazuva ano vebudiriro yenyika neepasi rese izvo zvinofanirwa kuzivikanwa.
Mabhuku paradio. Tinoyeuka nyaya dzinotyisa dzaJuan José Plans.
Tinorangarira nyaya dzinotyisa dzechirongwa chengano _Historias_, chakatungamirwa nemutori wenhau uye munyori Juan José Zvirongwa.
Edgar Allan Poe anotendeuka 19 nhasi, Ndira 208. Isu tinomukorokotedza uye nekumurova mbichana nekuda kwechimiro chake uye kukosha kwebasa rake rekusafa.
Iri bhuku rakafemera mhondi nhatu uye 'rakapedza' hupenyu hwaLennon
Rimwe bhuku rakanangana nemhondi mbiri uye kuyedza kwechitatu. Iri bhuku riri kutaurwa rinogona kunge rakave nesimba rakatarisirwa pane mhondi.
Chiitiko chinoshamisa chekuverenga bhuku nemhino dzako
Patrick Süskind nebasa rake "Perfume" hazviite kuti iwe uverenge nepfungwa yekunhuhwirira. Inotipa isu, nenzira iyi, nyika yechokwadi uye inonhuwirira inouraya.
Edgar Allan Poe Anomwe Matipi Ekunyora Nyaya uye Nhetembo
Edgar Allan Poe, tenzi weanotyisa mabhuku emhando, anotipa mamwe 'matipi' kana matipi ekuvandudza kunyorwa kwe ...
Anotyisa mabhuku eHalloween
Nakidzwa nekuverenga aya manomwe anotyisa mabhuku eHalloween. Iwe unofarira zvinotyisa mabhuku here? Isu tinokuvimbisa kuti unotya zvikuru iwe sarudza iyo yaunosarudza.
Iwo akanakidzwa epamusoro ematsotsi emabhuku emabhuku nevaverengi
Iwo akanakidzwa epamusoro ematsotsi emabhuku emabhuku nevaverengi. Makamboverenga here? Iwe unofunga kuti vamwe vanofanirwa kuve pane iwo runyorwa? Tiudzei mumashoko.
Yakagamuchirwa: Insomnia Kuunganidzwa kweMupepeti Valdemar
Yakagashirwa mabhuku maviri ekutanga eInsomnia Unganidzo yeiyo Valdemar yekutsikisa imba
Paunomuka iwe unonzwa kunge nyowani. Iwe hauna kumbofunga kuti mubhedha wezana ramakore rechiXNUMX unogona kuve wakasununguka kudaro. Tea…